Lehilahy tompona orinasa no tonga nametraka fitoriana ny 7 janoary teo tamin’ny 5 ora hariva noho ny fisiana lehilahy 1 milaza ho mpiasan’ny Tambajotra «Telma» ka niantso azy tamin’ny findainy sy milaza hanome fahana sy tombontsoa ho azy raha manaraka ny toromarika rehetra lazainy.
Fantatr’io lehilahy niantso io ny mombamomba azy sy ny vola ao anaty kaonty « M’vola » izay mifandraika amin’ny «Puce»ny. Nasain’io mpisoloky io manoratra «code» maromaro izy natao hakana vola amin’ny DAB-BFV raha toa ka misy vola ao anaty « Mvola » ary tsy ilàna finday na « carte bancaire » ny maka azy fa « code temporaire » maharitra 30 minitra no ampiasaina. Efa mailo anefa izy ka niantso ny Telma.
Namaly ny Telma fa tsy misy izany velively fa fisolokiana izany. Nomeny «code temporaire » diso ilay mpisoloky ary naniraka ny mpiara-miasa aminy hanara-maso ny DAB teo 67ha. Tamin’ny 5 ora sasany no nisy lehilahy mijorojoro manodidina ny DAB teo amin’ny Havana 67ha. Rehefa nantsoina dia naneno ny findainy ary noraisiny. Nosamborina avy hatrany izy ka vao nahita ny polisy dia nikasa ny handositra saingy voasambotra.